Melez Zani oo geeriyooday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra'iisalwasare Melez Zenawi waxay da'diidso ahayd 57-sanno jir. Foto: Erik Johansen/Scanpix
Melez Zani oo geeriyooday
La daabacay tisdag 21 augusti 2012 kl 09.48
Ra'iisalwasarahii Etobiya Melez Zenawi aya sida ay sheegtay warbaahinta dalkas geeriyooday. Zenawi ayaa ahaa ruxii waday wadahalada cafiska loogu fidinayo labada saxaafi ee reer Sweden ee ku xiran Etiopia, Martin Schibbye iyo Johan Persson.
Kjetil Tronvoll oo ah khabiir ku xeel-dheer Etobiya kana dhiga caluumta sharciyada caalamka Oslo Norweyd ayaa ka welwelsan in wadankaas cagaha la galo qalqal. Waxa uuna aaminsanyahay in aramihii cafis u fidinta saxaafiinta reer Sweden ay dib ugu noqotay halkii ay ka soo bilaabantay.
- Tan ugu daran ayaa ah in arimaha cafis u fidinta dib u dhacdo, ma la filayo in dowladda KMG ku degdegi doonto cafis fidinta. Waxay u egtahay in lagu qasbanaan doono in la sugo inta xilka lagu wareejin doono hogaamiye rasmi ah. Waxaan rajeenayaa in hogaamiha cusob uu noqdo mid taanaasul ogal oo ka fakara sumcada Etobiya ee caalamka islamarkaana u ogalaada saxaafiinta cafiska ay ka dalbadeen.